Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Nianjera tany an-tany efitr'i Kalifornia ny fiaramanidina mpiady Super Hornet
Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Tourism • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Fianjerana fiaramanidina mpiady
Ny toerana: Death Valley National Park. Ny fiaramanidina: fiaramanidina mpiady amerikana F / A-18F Super Hornet. Ny tranga: nianjera tany amin'ny faritra atsimon'ny tany efitra.
Ny Navy dia nanofana mpanamory fiaramanidina tao amin'ny Death Valley National Park hatramin'ny taona 1930.
Ity fianjeran'ilay fiaramanidina mpiady ity dia nitranga tamin'ny 3 ora tolak'andro tamin'ny 4 Oktobra ary an'ny Air Test and Evaluation Squadron (VX) 9.
Ny karazana fiaramanidina mitovy - ny jet F / A-18F mpiady - nianjera tao Death Valley tamin'ny taona 2019 tao amin'ny faritra iray nantsoina hoe Star Wars Canyon.
Fanindroany izao ny fiaramanidina mpiady amerikana amerikana nianjera tao amin'ny Death Valley National Park tao anatin'ny 3 taona lasa. Raha ny mahazatra dia tsy mahazo mandeha amin'ireo valan-javaboary ny sidina fampiofanana miaramila, na izany aza, ity faritra amin'ny Death Valley izay nisehoan'ny lozam-pifamoivoizana ity dia natokana manokana ho toerana ho azy ireo rehefa nampidirin'ny kaongresy ilay faritra tamin'ny valan-javaboary 27 taona lasa izay. Ny Navy dia nanofana mpanamory fiaramanidina teto hatramin'ny taona 1930.
Ny fianjeran'ilay fiaramanidina mpiady dia nitranga tamin'ny 3 ora tolak'andro tamin'ny 4 oktobra lasa teo ary an'ny an'ny Air Test and Evaluation Squadron (VX) 9. Soa ihany fa nahavita nivoaka ny mpanamory fiaramanidina ary notsaboina noho ny ratra kely nahazo azy tao amin'ny hopitaly tany Las Vegas ary navotsotra.
Amin'ny taona 2019, ity fiaramanidina ity ihany, ny F / A-18F Super Hornet, nianjera tany Rainbow Canyon, antsoina koa hoe Star Wars Canyon, amin'ny faritra andrefan'ny valan-javaboary fantatra amin'ny hoe Father Crowly Vista Point. Mampalahelo fa io fianjerana io dia namono an'i Lt. Charles Z. Walker ary nahatonga fahavoazana ho an'ny olona nijoro.
Ny rindrin'ny Star Wars Canyon dia vita amin'ny vatosokay Paleozoic metamorphosed sy vatolampy pyroclastic hafa. Io fitambarana fitaovana vato io dia namorona rindrina mena, volondavenona ary mavokely mitovy amin'ilay planeta Star Wars Tatooine noforonina, ka izany no anarany.
Toerana malaza ho an'ireo mpiondana fiaramanidina haka fiaramanidina mpiady amerikana manao fiofanana amin'ny fiaramanidina ambany izy ireo rehefa miakatra mamakivaky ireo hadilanana tery amin'ny Death Valley. Tsy nisy mpitsidika ny valan-javaboary naratra tany amin'ny toerana nitrangan'ny fianjerana tany akaikin'ny Naval Air Weapon Station China Lake, izay mifanila amin'ny valan-javaboary atsimo andrefany.
Fiaramanidina mpiady hafainganam-pandeha mamakivaky ilay lohasaha 200 ka hatramin'ny 300 mph ary rehefa manidina ambany hatrany amin'ny 200 metatra ambonin'ny gorodona, dia mbola an-jatony metatra monja eo ambanin'ireo mpandinika eo amin'ny sisiny no misy azy ireo. Ny mpitsikilo fiaramanidina dia mifanakaiky amin'ny fiaramanidina ka matetika izy ireo no mahita ny endrik'ireo mpanamory fiaramanidina, izay, manolotra fihetsika sy famantarana vitsivitsy amin'ireo mpiambina.